के तपाईंहरुलाई थाहा छ, खाली पेटमा काँचो लसुन खानुको फाइदाहरु ? - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाईंहरुलाई थाहा छ, खाली पेटमा काँचो लसुन खानुको फाइदाहरु ?
लसुनले हामीले खाने खानेकुरालाई स्वादयुक्त मात्रै बनाउँदैन । यसको नियमित सेवनले हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमताको पनि विकास गराउँछ।
लसुनमा हुने एलियम नामक तत्त्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिबायोटिक सरहको काम गर्छ, जसले हाम्रो शरीरमा देखिने धेरै खालका रोगको उपचारमा सहयोगी बन्छ। खाली पेटमा नियमित लसुनको सेवन गर्नाले उच्च रक्तचाप कम गर्नुका साथै अन्य धेरै पाइदा गर्छ ।
यी हुन् खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदा :
हरेक बिहान काँचो लसुन मनतातो पानीसँग खानाले मोटोपन घटाउनुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्न सहयोग गर्छ।
0 नियमित खाली पेटमा काँचो लसुनको सेवन गर्नाले उच्चरक्तचापको समस्या नियन्त्रण गर्नुका साथै मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ।
0 काँचो लसुन नियमित खानाले शरीरमा मधुमेह नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
याे पनि पढ्नुस एआरटी खाँदै संक्रमित
0 काँचो लसुन खाली पेटमा नियमित सेवन गर्नाले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै पेटको विकारलाई कम गर्न सहयोग गर्छ।